Apple Inotangisa Zvirongwa zveIndia Zvekuhaya zve iPhone SE | IPhone nhau
Mazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezve budiriro diki iyo iyo nyowani iPhone SE yaive nayo muIndia, kunyangwe iri pachena kuzvipira kumusika uyu. Kusvikira kumavhiki maviri kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone SE, Apple yakaramba ichitengesa iyo iPhone 5s pamutengo unoshamisa, zvichikonzera huwandu hukuru hwekutengesa kweiyi yakati veteran modhi.
Asi mushure mekuuya kweiyo nyowani iPhone SE, kutengesa kunoita kunge kwakamiswa zvachose. Muinopfuura chete vhiki, haina kana kuita zviuru zvitatu zvakachengeterwa mumaguta matatu makuru enyika, uko vatengesi vakasiyana varikutotengesa.
Chikamu chemhosho, chokwadika, ndiwo mutengo wechigadzirwa, kubvira 16GB modhi inowanikwa madhora mazana matanhatu, mutengo unonzvenga chikamu chikuru cheveruzhinji munyika, uko mafoni mazhinji ari kutora musika haapfuuri mazana maviri emadhora. Asi zvinoita sekunge Apple inoda kugadzirisa dambudziko iri uye iyo Cupertino-based kambani yakaparura akati wandei marongero ehurongwa kuitira kusimudzira kutengeswa kweichi chishandiso.
Sekureva kweBusiness Standard, Apple yakatanga zvirongwa zvakati wandei zvevashandisi vanofarira kunakidzwa neichi chishandiso, unogona kuzviita mune yakatarwa nguva yakatarwa, iyo ichabhadharwa pamwedzi kwemakore maviri. Iyo yakachipa zano inogona kuwanikwa ye $ 15. Kamwe kukweretesa kwechigadzirwa kwapera, mushure memakore maviri, mutengi anogona kuchinjanisa chishandiso nechimwe chitsva kana kuchichengeta zvachose.
Asi pamusoro pezvo, kambani iyi yakatangawo mushandirapamwe wekushambadzira mumapepanhau mazhinji emunyika. kushambadza ichi chishandiso, sezvo chimwe chezvikonzero zvekutengesa kushoma kunogona zvakare kukurudzirwa nekusaziva kwevatengi. Parizvino Apple inoita kunge isiri kudzokorora kubudirira kwayakatowana muChina, uko hupfumi husina kufanana nehwo hwenyika yakavakidzana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Apple Inovhura Indian Leasing Zvirongwa zve iPhone SE
Apple Mazita Project Titan Zvivakwa Kubva kuGreek Mythology